Barbarihii Germany, Bandhigii Iniesta & Ramos Oo Fariin Ku Aadan Koobka Aduunka U Diray Xidigaha Spain %
Kabtanka xulka qaranka kubada cagta Spain, wiilka lagu magacaabo Sergio Ramos ayaa wuxuu amaan uu kow-uga siiyay ciyaartoyda ay isku wadanka yihiin, kadib markii muuqaal ciyaareed waali ah soo bandhigeen kulankii ay 1-1 la galeen Germany.
“Waxaan garoonka ku muujinay wax ay awoodaan xulalka qaarkood – Germany waa xulka dunida ugu fiican – Taasi waa sababta aan u aaminay Jiilalka qaarkood,” ayuu hadalkiisa bilaabay Ramos, xili uu warbaahinta uwaramayay.
Ramos oo ka hadlay natiijdii kasoo baxday kulankii ay la dheleen difaacadayaasha koobka aduunka ayaa wuxuu ku nuux-nuux saday in hadii ay joogteeyaan bandhigyada noocaan ah ay rajo natiijjo fiican ka keeni doonan koobka aduunka 2018.
“Waa inaan mar walba joogteeno bandhigyadeena si aan usii joogno heerarka kala duwan – Waxaan ula dhaqmi doonaa dhinac walba oo naga hor yimaada si ay ku jirto xishmad,” ayuu hadalkiisa kusii daray, Sergio Ramos.
Sidoo kale, daafacaan ayaa waxyaabaha kale ee uu ka hadlay waxaa kamid ah muuqaal ciyaareedka uu kulankaan sameeyay kabtanka Barcelona ee Andres Iniesta, isagoona cod dheer ku sheegay in laacibkaan uu awood uleeyahay inuu wax badan dheelo.
“Hadii uu isaga uusan dooneyn in la nasiyo, wuxuu Iniesta ciyaari karaan wax badan,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay Ramos.
Germany vs SpainIniestaRamos
Macalin Xulka Spain Oo Ka Hadlay Barbarihii Ay La Galeen Germany Iyo Hadii Ay Tabeen Sergio Basquets